Inkqubo yolawulo lomgangatho | Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.
Sizama konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa umgangatho wemveliso onokuthenjwa kunye nemveliso enomdla. Ukususela kuyilo, imveliso, ubhaqo kulawulo, senza ulawulo lobungcali kwinyathelo ngalinye kunye nenkqubo nganye ngokutsho ISO9001: 2000 izithethe kunye nemigangatho.
Ulawulo loMgangatho woMgangatho
Ngaphezu kweminyaka elishumi, sihlala sigxile kumgangatho. Siphumeza ulawulo lomgangatho ngokungqongqo ngokwemigangatho yenkqubo yolawulo lomgangatho ye-ISO13485 kunye nesixhobo sonyango i-GMP. Ukusuka kwimpahla eluhlaza, inkqubo yokuvelisa ukuya kwiimpahla ezigqityiweyo, umgangatho ulawulwa ngokungqongqo kuyo yonke inkqubo. Abantu bovavanyo lobuchwephesha kunye nezixhobo zovavanyo ezifanelekileyo zibalulekile kulawulo lomgangatho oluthembekileyo, kodwa imeko yoxanduva kwiqela lomgangatho - umgcini womgangatho wemveliso- kubaluleke ngakumbi.
Inkqubo yokuLawulwa kokuLawulwa
Umgangatho olungileyo uvela kwinkqubo elungileyo yokuvelisa. Isitalato yokuvelisa amandla ayifuni kuphela izixhobo eziphambili, kodwa kunye nenkqubo yesiqhelo kunye nokusebenza okumiselweyo ukunciphisa inkqubo kunye nokugcina uzinzo. Iqela lethu eliqeqeshwe kakuhle lokuvelisa lijonga rhoqo inkqubo yokuvelisa kunye nomgangatho wemveliso, lenza uhlengahlengiso kwangexesha ngokuhambelana notshintsho, kwaye liqinisekisa ukuvelisa okuthe tye.
Izixhobo, uMsiki kunye noLawulo lokufikelela
Ukuphuculwa kwezixhobo yindlela ebalulekileyo yoyilo lobuchwephesha. Izixhobo ze-CNC zobuchwephesha ziye zonyusa ukusebenza ngokukuko kwemveliso, kwaye okona kubaluleke kakhulu, kuzisa ukonyuka kwejiyometri ngokuchaneka kwemishini. Ihashe elilungileyo kufuneka lixhotyiswe ngesihlalo esihle. Sisoloko sisebenzisa abagawuli abenziwe ngokwesiko kwiimveliso zasekhaya nezamazwe aphesheya ezibhalisiweyo kunye nenkqubo yolawulo lomthengisi emva kokuqinisekiswa. Abasiki bathengwa kubavelisi abathile kwaye basetyenziswa phantsi kwemigaqo yolawulo lobomi benkonzo, ukutshintshwa kwangoko kunye nokuthintela ukusilela ukuqinisekisa ukuchaneka koomatshini kunye nozinzo lomgangatho rhoqo. Ngaphezu koko, amazwe oyile ukuthambisa ajikeleze kunye nezipholisi ulwelo zisetyenziswa ukuphucula machinability, ukunciphisa ifuthe machining kwizixhobo, nokuphucula umgangatho umphezulu imveliso. Ezi oyile zokuthambisa kunye nezinto ezipholileyo ezingamanzi azinangcoliseko-moya, kulula ukuzicoca, kwaye aziyintsalela.
Iimveliso zethu ziyilelwe ukunciphisa ixesha lokusebenza, kwaye umlinganiso wamathambo abantu abadala omalunga nama-60% uphakathi kwezona zibalaseleyo e-China. Sizinikele kuyilo nakwimveliso yeemveliso zeatomic ngaphezulu kweminyaka elishumi, kwaye iimveliso zahlulwe zaziindidi ezahlukeneyo ngokweemeko zamathambo abantu kwiindawo ezahlukeneyo. Amagcisa anamava eminyaka akhokelela kuyo yonke inkqubo ekukhetheni izixhobo, ukuqhubekeka kunye nokwenza imveliso ukuhlanganisa nokuseta. Iseti nganye yezixhobo ziphawulwe nge-ID ehambelana neemveliso ezithile, ukwenzela ukuqinisekisa ukungqinelana nokulungiswa kwemveliso.